Afo sy fipoahana lehibe: nafindra toerana ny gara gara Elephant sy Castle any London |
Home » Lahatsoratra » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any UK » Afo sy fipoahana lehibe: nafindra toerana ny gara sy ny gara an'ny Elefanta sy ny Londres
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny dia any Eropa • Raharaham-panjakana • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Other • Fitsangatsanganana an-dalamby • Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra • Safety • Vaovao momba ny fizahantany • Dinika fizahan-tany • Vaovao momba ny fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao mivalona • Vaovao any UK
Afo sy fipoahana lehibe: nafindra toerana ny gara sy ny gara an'ny Elefanta sy ny Londres
Ny firehetana dia nameno ireo trano fivarotana telo ao ambanin'ny lalamby fiantsonan'ny gara, ary koa fiara efatra sy boaty telefaona.
Ny Fire Brigade any Londres dia namporisika ny mponina hisoroka ny faritra ary hanidy ny varavarankely sy ny varavarana rehetra.
Ireo manamboninahitra avy amin'ny polisy misahana ny fitaterana anglisy sy ny polisy Metropolitan dia manatrika izany ihany koa
Tsy inoana fa misy ifandraisany amin'ny fampihorohoroana io tranga io, hoy ny polisy.
Nesorina androany ny tobin'ny Elephant sy Castle any Londres any ambanin'ny tany, taorian'ny hain-trano lehibe niseho teo akaikin'ny gara.
Setroka setroka mainty matevina no hita naneno avy tao amin'ny foibe fitaterana ny alatsinainy teo ho eo ny sary navoaka tao amin'ny media sosialy. Ny horonan-tsary iray dia nampiseho ireo mpiasan'ny vonjy taitra sy ny mpandalo nijery ny fahamaizana talohan'ny fipoahan'ny afo lehibe iray avy teo anilan'ny tranobe iray.
Masinina mpamono afo miisa 15 sy mpamono afo miisa 100 no naparitaka hiatrehana ny fahamaizana, hoy ny London Fire Brigade.
Tsy mbola nisy ny tatitra naratra.
Farafahakeliny fipoahana iray no nanozongozona ny toerana taorian'ilay hain-trano ary teo am-panatanterahana ny famindran-toerana ireo.
Ny Fire Brigade any Londres dia namporisika ny mponina hisoroka ny faritra ary hanidy ny varavarankely sy ny varavarana rehetra. Tao anaty fanambarana iray dia nanamafy ny fanidiana ny làlana ary nilaza fa ny fahamaizana dia nandrakotra trano fivarotana telo ao ambanin'ny lalamby fiantsonan'ny gara, ary koa fiara efatra sy boaty telefaona.
Ireo manamboninahitra avy amin'ny polisy misahana ny fitaterana anglisy sy ny polisy Metropolitan dia manatrika izany ihany koa.
"Tsy inoana fa misy ifandraisany amin'ny fampihorohoroana io tranga io," hoy ny mpitondra tenin'ny polisy tao amin'ny faritanin'i Southwark any London.
Ny mpandraharaha ny lalamby Thameslink dia nilaza fa ny tsipika rehetra amin'ny alàlan'ny Elephant sy Castle dia voasakana ary ny mpamono afo dia manombana ny toe-javatra. Tamin'ny fanavaozana navoakan'ny National Rail, nilaza ity serivisy ity faafo eo akaikin'ny lalana ” dia midika fa tsy afaka mampiasa ny gara ny fiaran-dalamby raha tsy farafaharatsiny amin'ny 8 ora alina any an-toerana.